Pfekeraiti Bhora Slides Vagadziri & Vatengesi - China Powder Bhodhi Slides Factory
Chiso furemu kabhodhi poda ichimwaya pasi pagomo gadziriro yekuvhara dhirowa
Nhanganyaya:Chiso furemu kabhodhi poda ichimwaya pasi pagomo gadziriro yekuvhara dhirowa. Yakagadzirwa nekutsika muchina. Inogona kushandisa yeAmerican mhando kumeso furemu makabati Iwo mutoro chinzvimbo chakakomberedza 25 KGS uye iyo bhasikoro pamusoro pe50,000 nguva. Chinhu ichocho chinotenderera nemasiraidhi mapads, kutsvedza kwakatsetseka neruzha ruzha, basa rine chekuita nearo, mapara ekumira mabits kudzivirira iyo yekutsvedza-kunze chimiro. Iko kushandiswa kwepamberi tekinoroji tekinoroji, isina-chepfu inochengetedza zvakatipoteredza, inoshanda anti-ngura, anti-ngura.
Muenzaniso Nha .: US02A
604 Series European pasi vanomhanyisa pachezvayo vega upfu zvemapuranga chinotenderera ondomoka
Nhanganyaya:604 Nhepfenyuro European yepasi inokwidziridza yega yega hupfu hwakaputirwa roller slide ndiyo iri nyore mhando yedhirowa inotsvedza. Yakagadzirwa nekutsika muchina. Inogona kushandisa kune ese marudzi emidziyo yemidziyo. Mutoro unokwanisa kutenderedza 25 KGS uye kutenderera kupfuura zviuru makumi mashanu. Chinhu ichocho chinotenderera nemasiraidhi mapads, kutsvedza kwakatsetseka neruzha ruzha, basa rine chekuita nearo, mapara ekumira mabits kudzivirira iyo yekutsvedza-kunze chimiro. Iko kushandiswa kwepamberi tekinoroji tekinoroji, isina-chepfu inochengetedza zvakatipoteredza, inoshanda anti-ngura, anti-ngura.
Muenzaniso Nha .: YA-01
FGV Series yepasi gomo pachedu yekuvhara hupfu yekumhara South America dhirowa masiraidhi
Nhanganyaya:FGV Series yepasi gomo pachedu yekuvhara hupfu yekupfekedza South America dhirowa masiraidhi ndiyo iri nyore mhando yedhirowa inotsvedza. Yakagadzirwa nekutsika muchina. Inogona kushandisa kune ese marudzi emidziyo yemidziyo. Mutoro unokwanisa kutenderedza 25 KGS uye kutenderera kupfuura zviuru makumi mashanu. Chinhu ichocho chinotenderera nemasiraidhi mapads, kutsvedza kwakatsetseka neruzha ruzha, basa rine chekuita nearo, mapara ekumira mabits kudzivirira iyo yekutsvedza-kunze chimiro. Iko kushandiswa kwepamberi tekinoroji tekinoroji, isina-chepfu inochengetedza zvakatipoteredza, inoshanda anti-ngura, anti-ngura.
Muenzaniso Nha .: YA-02
86mm Kureba dhirowa padivi pani inotsvedza simbi bhokisi dhirowa
Nhanganyaya:86mm Height dhirowa padivi pani inotsvedza simbi bhokisi dhirowa ndiyo iri nyore mhando yeadhirowa system. Yakagadzirwa nekutsika muchina. Inogona kushandisa kune ese marudzi emidziyo yemidziyo. Mutoro unokwanisa kutenderedza 25 KGS uye kutenderera kupfuura zviuru makumi mashanu. Chinhu ichocho chinotenderera nemasiraidhi mapads, kutsvedza kwakatsetseka neruzha ruzha, basa rine chekuita nearo, mapara ekumira mabits kudzivirira iyo yekutsvedza-kunze chimiro. Iko kushandiswa kwepamberi tekinoroji tekinoroji, isina-chepfu inochengetedza zvakatipoteredza, inoshanda anti-ngura, anti-ngura.
Muenzaniso Nha .: YA-03A86
118mm simbi bhokisi mudhirowa inotsvedza (poda yakavharwa roller slide)
Nhanganyaya:118mm simbi bhokisi mudhirowa inotsvedza (poda yakavharwa roller slide) ndiyo iri nyore mhando yedhirowa system. Yakagadzirwa nekutsika muchina. Inogona kushandisa kune ese marudzi emidziyo yemidziyo. Mutoro unokwanisa kutenderedza 25 KGS uye kutenderera kupfuura zviuru makumi mashanu. Chinhu ichocho chinotenderera nemasiraidhi mapads, kutsvedza kwakatsetseka neruzha ruzha, basa rine chekuita nearo, mapara ekumira mabits kudzivirira iyo yekutsvedza-kunze chimiro. Iko kushandiswa kwepamberi tekinoroji tekinoroji, isina-chepfu inochengetedza zvakatipoteredza, inoshanda anti-ngura, anti-ngura.
Muenzaniso Nha .: YA-03A118
150mm simbi bhokisi mudhirowa inotsvedza
Nhanganyaya:150mm simbi bhokisi dhirowa inotsvedza ndiyo iri nyore mhando yemadhirowa system. Yakagadzirwa nekutsika muchina. Inogona kushandisa kune ese marudzi emidziyo yemidziyo. Mutoro unokwanisa kutenderedza 25 KGS uye kutenderera kupfuura zviuru makumi mashanu. Chinhu ichocho chinotenderera nemasiraidhi mapads, kutsvedza kwakatsetseka neruzha ruzha, basa rine chekuita nearo, mapara ekumira mabits kudzivirira iyo yekutsvedza-kunze chimiro. Iko kushandiswa kwepamberi tekinoroji tekinoroji, isina-chepfu inochengetedza zvakatipoteredza, inoshanda anti-ngura, anti-ngura.
Muenzaniso Nha .: YA-03A150